प्रचण्डका घरबेटीको ज्यादती: २ वर्षमा बन्नु पर्ने सडक ९वर्ष अलपत्र।चिया खर्च भन्दै दैनिक २०औ हजार घुस भिडियो हेर्नुहोस ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारप्रचण्डका घरबेटीको ज्यादती: २ वर्षमा बन्नु पर्ने सडक ९वर्ष अलपत्र।चिया खर्च भन्दै दैनिक २०औ हजार घुस भिडियो हेर्नुहोस !
भिडियो समाचारको अन्तिममा राखिएको छ पुरा समाचार हेर्नुहोस महिला र पुरुष एकै रथका दुई पाग्रा हुन । एक अर्का बिनाको जिन्दगी पनि चल्दैन पनि । पुरुष र महिलामा को उत्कृष्ट । समान भनिन्छ तर मेरो विचारमा महिला नै उत्कृष्ट छन् किनभने महिला सहनशील सुन्दर र गर्भ धारण गरेर सन्तान जन्माउने प्राणी हुन् । पुरुषप्रधान समाजमा विभिन्न बोझ र जिम्मेवारीले थिचिनुका बाबजुद पनि सारा चुनौती चिरेर पनि नेपाली महिला उच्च पदमा पुग्न सफल छन् ।महिलाहरुमा भएका यस्ता गुण क्षमता एवं विशेषताले उनीहरूलाई उत्कृष्ट बनाएको छ । म महिला नै हुनुपर्ने एउटै मात्र कारण छैन । शारीरिक रूपमा पुरुष भएर जन्मिए पनि भावनात्मक रूपमा म महिला हुँ । म भित्रको विचार व्यवहार धैर्य सहनशीलता अनि ममता नै म महिला बन्नुपर्ने कारण हुन् ।
January 3, 2021 admin समाचार 1345
January 2, 2021 admin समाचार 1545
काठमाडौँ । अहिले हरेक चिजको मुल्यले आकाश छोईरहेको छ । जे किन्न पनि महंगो भएका कारण मानिसहरु महंगिले आक्रानत भएको बेला काठमाडौंमै शान्ता बातावरणमा यती धेरै भेराईटिको खाना खाने ठाउँ भेट्दा जो कोही आकर्शित हुने
November 26, 2020 admin समाचार 3279